Tax file number တစ်ခု လျှောက်ခြင်း | Australian Taxation Office
TFN တစ်ခု လျှောက်ခြင်း
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်မဟုတ်သည့် အခြားဘာသာများဖြင့် စာရွက်စာတမ်းများ
သင်၏ TFN နှင့် myGov အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းခြင်း
နိုင်ငံရပ်ခြားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများ၊ အမြဲရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့် ယာယီအလည်လာသူများ
Australia Post ၌ လျှောက်ခြင်း
Services Australia စင်တာတစ်ခု၌ လျှောက်ခြင်း
Tax file number တစ်ခု လျှောက်ခြင်း
Tax file number (TFN) ဆိုသည်မှာ အခွန်နှင့် သက်ပြည့်အငြိမ်းစား လစာစနစ်များရှိ သင်၏ ကိုယ်ပိုင်အညွှန်းနံပါတ် ဖြစ်သည်။
TFN တစ်ခု အခမဲ့ လျှောက်နိုင်ပါသည်။
သင်၏ TFN မှာ -
သင်၏အခွန်နှင့် သက်ပြည့်အငြိမ်းစားလစာမှတ်တမ်းများ၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထား၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် - ၎င်းကို လုံခြုံစွာ သေချာထိန်းသိမ်းထားပါ
သင် အမည်ပြောင်းခြင်း၊ အလုပ်ပြောင်းခြင်း၊ ပြည်နယ်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားလျှင်ပင် သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက် နံပါတ်ဖြစ်သည်။ သင်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပြောင်းလဲသွားပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို အသိပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
သင့်တွင် TFN တစ်ခု မဖြစ်မနေရှိစရာမလိုပါ၊ သို့သော် ဤနံပါတ်မရှိလျှင် သင် အခွန်ပိုပေးရမည်။ သင့်အနေဖြင့် အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်များလည်း လျှောက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်ဖြင့် သင်၏ အခွန်စည်းကြပ်ရန် တင်ပြရမည့် ဝင်ငွေစာရင်းတစ်ခုလည်း တင်သွင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ် သြစတြေးလျနိုင်ငံ စီပွားရေး လုပ်ကိုင်ခွင့်နံပါတ် (ABN) တစ်ခုလည်း ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
TFN တစ်ခု လျှောက်ထားပုံမှာ သင်၏အခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အောက်ပါတို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာလျှောက်ထားရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုပါ -
နိုင်ငံရပ်ခြားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများ၊ အမြဲရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့် ယာယီအလည်လာသူများ - သင်သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် နေထိုင်နေသူဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး တရားဝင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်း (ဗီဇာ) တစ်ခု ရှိရမည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူများ - သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားသူများ သို့မဟုတ် သြစတြေးလျနိုင်ငံသား ရရှိထားသူများအတွက်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံပြင်ပတွင် နေထိုင်သူများ - သြစတြေးလျနိုင်ငံရင်းမြစ်မှ ဝင်ငွေရရှိသည့် အခွန်ကိစ္စများအတွက် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် မနေထိုင်သူများအတွက် သင်သည် ကြိုတင်ကောက်ခံထားသည့် အခွန်မှ ပြန်အမ်းငွေတစ်ရပ် တောင်းဆိုရန် TFN တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
သင်၏နေထိုင်မှုအခြေအနေကို သေချာမသိပါက – သင်၏ အခွန်ပေးဆောင်ရန် ထိုက်သင့်သည့်နေထိုင်မှုကို တွက်ချက်ကြည့်ပါ။
သင်ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားသော လျှောက်လွှာနှင့် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိပြီးနောက် သင်၏ TFN ကို ရရှိရန် 28 ရက်အထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။ နှောင့်နှေးမှုများမဖြစ်စေရန် နောက်ထပ်လျှောက်လွှာတစ်ခု မတင်သွင်းပါနှင့်။ စီမံဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်း သင်၏စိတ်ရှည်သည်းခံပေးမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ 28 ရက်ကြာပြီးနောက် သင်၏ TFN အသိပေးစာကို မရရှိသေးပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏လျှောက်ထားမှုကို ထောက်ခံပေးရန် တင်ပြထားသော မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ၏ မိတ္တူများကို မူရင်းစာရွက်စာတမ်း၏ မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်အတည်ပြုသင့်သည်။
သင့်အနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားခြင်းမဟုတ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို တင်သွင်းမည်ဆိုပါက တရားဝင်အတည်ပြုထားသော ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုမှ ပြန်ဆိုထားသည့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကိုလည်း တင်သွင်းရပါမည်။
ဘာသာပြန်ဆိုမှုအားလုံးတွင် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဘာသာပြန်တစ်ဦးမှ ၎င်းသည် မြင်တွေ့ခဲ့ရသော စာရွက်စာတမ်းမှ ဘာသာပြန်ဆိုထားသော ဘာသာပြန်ဆိုမှုအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြချက်တစ်ခု ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဘာသာပြန်ဆိုမှုတွင် တရားဝင်အတည်ပြုသူ၏ အသိအမှတ်ပြုစာလွှာကို ဖော်ပြသည့် တရားဝင်တံဆိပ် သို့မဟုတ် အလားတူအမှတ်အသားလည်း ပါရှိသင့်သည်။
ဘာသာပြန်ဆိုမှုများမှာ မူရင်းဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားထားသော မူရင်းစာရွက်စာတမ်း၏ မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုထားသည့် မိတ္တူတစ်ခုနှင့်အတူ ပါရှိသင့်ပြီး ၎င်းကို တရားဝင်အတည်ပြုသူမှ မိတ္တူမှန်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တံဆိပ်ခပ်နှိပ်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးရမည်။
သင်၏ TFN အပါအဝင် သင်၏ ကိုယ်ပိုင် အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကို လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့် သင်၏ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားကို သေချာကာကွယ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်မှ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများကို လိမ်လည်ပြုလုပ်ရန် သင့်အမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ လိပ်စာ၊ myGov အသေးစိတ် အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် TFN ကဲ့သို့ အခြေခံအသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့သာ လိုအပ်ပါသည်။
အောက်ပါတို့အပါအဝင် သင်၏ TFN ကို တောင်းခံနိုင်သည့် လူနှင့် နေရာ အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည် -
သင်၏ သက်ပြည့်အငြိမ်းစားလစာ ရန်ပုံငွေ
သင်၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော အခွန်ကိုယ်စားလှယ်။
သင်၏ TFN ကို လျှို့ဝှက်စွာသိမ်းထားပါ။ သင်သည် ၎င်းကို အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည်များမှလွဲ၍ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ မမျှဝေသင့်ပါ။ သင်၏ TFN ကို ရရှိသည့်အခါ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား ခိုးယူမှုနှင့် လိမ်လည်မှုကို တားဆီးကာကွယ်ရန် သင်၏ TFN နှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားရန် အရေးကြီးပါသည်။
MyGov မှာ အစိုးရအွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်ရောက်ရန် ရိုးရှင်းပြီး လုံခြုံသည့်နည်းစနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ သင်၏ myGov အကောင့်မှာ သင်၏ ကိုယ်ပိုင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထား အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပါရှိသဖြင့် သင်၏စကားဝှက်အပါအဝင် သင်၏ myGov အကောင့်ဝင်ရောက်ရန် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မည်သူ့ကိုမှ မျှဝေမပေးရန် အရေးကြီးသည်။
ဤသည်တို့ကိုလည်း ကြည့်ရှုပါ -
TFN ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် အခိုးခံရခြင်း
နိုင်ငံရပ်ခြားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများ၊ အမြဲရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့် ယာယီအလည်လာသူများအနေဖြင့် tax file number (TFN) တစ်ခု အွန်လိုင်းမှ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ သင်သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်း ရောက်ရှိနေပြီးသူဖြစ်ရမည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ရန် ယာယီအလည်လာသူများနှင့် အမြဲရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများသည် Department of Home Affairs မှ ခွင့်ပြုချက်တစ်ခု (တရားဝင် ဗီဇာတစ်ခု) လိုအပ်သည်။
အောက်ပါအခြေအနေသုံးရပ်လုံးနှင့်ကိုက်ညီပါက သင်သည် TFN တစ်ခု အွန်လိုင်းမှ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
သင်သည် နိုင်ငံရပ်ခြားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူ၊ အမြဲရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့် ယာယီအလည်လာသူ ဖြစ်သည်
သင်သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် နေထိုင်နေပြီးသူဖြစ်သည်။
သင့်ဗီဇာမှာ အောက်ပါတို့အနက် တစ်ခုဖြစ်သည်
(နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားများအား ဆိုက်ရောက်သည့်အခါ အလိုလျောက်ပေးသည့် ဗီဇာတစ်ခု အပါအဝင်) သင့်ကို သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ နေထိုင်ခွင့်ပြုသော ဗီဇာတစ်ခု။
အွန်လိုင်းမှ လျှောက်ရန် သင့်အနေဖြင့် တရားဝင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများ ရှိရမည်။ သင့်တွင် တရားဝင်ဗီဇာတစ်ခု မရှိပါက TFN တစ်ခု မလျှောက်နိုင်ပါ။
သင်သည် စာရွက်စာတမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ရန်မလိုပါ။
TFN တစ်ခု အွန်လိုင်းမှ လျှောက်ခြင်း
အားလပ်ရက်ခရီးသွားရင်း ယာယီအလုပ်လုပ်သူများ – ဤဗီဇာများအရ အခွန်နှင့် သက်ပြည့်အငြိမ်းစားလစာ ပေးချေခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းသူများအနေဖြင့် ပေါင်းကူးဗီဇာတစ်ခုနှင့် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တစ်ခုကို အသုံးပြုကောင်းအသုံးပြုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းနံပါတ်မှာ ၎င်းတို့၏ ImmiCard နံပါတ် ဖြစ်ပါမည်။ ယခင်က သက်သေခံကတ်ပြားများအတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းနံပါတ်မှာ PLO56 သို့မဟုတ် PL56 ဖြစ်ပါမည်။
အွန်လိုင်း TFN မှတ်ပုံတင်ခြင်း အသုံးပြုပုံ
သင့်အနေဖြင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါက၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် အောက်ပါတို့အနက် တစ်ခုခုဖြစ်လျှင် TFN တစ်ခု လျှောက်နိုင်ပါသည် -
အခွန်ကိစ္စများအတွက် သြစတြေးလျတွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်လျှင်
သင်၏နေထိုင်မှုအခြေအနေကို သေချာမသိပါက – အခွန်ပေးဆောင်ရန် ထိုက်သင့်သည့်နေထိုင်မှု ကို တွက်ချက်ကြည့်ပါ။
Australia Post ၌လျှောက်ခြင်း
Services Australia စင်တာတစ်ခု၌လျှောက်ခြင်း
သင်သည် သြစတြေးလျတွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လူတွေ့မေးမြန်းခြင်းတစ်ခုကို တက်ရောက်နိုင်ပါက TFN တစ်ခုကို Australia Post လက်လီအရောင်းဆိုင်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့်External Link လျှောက်ထားနိုင်သည်။ Australia Post မှာ TFN လျှောက်လွှာတစ်ခု တင်သွင်းခြင်းအတွက် အခကြေးငွေမကုန်ကျပါ။
သင်သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်လျှင် TFN တစ်ခု လျှောက်ထားရန် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ -
အွန်လိုင်းပုံစံကို ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်သည်External Link။
အကျဉ်းချုပ်ကို ပရင့်ထုတ်ပါ၊ ၎င်းတွင် သင်၏လျှောက်လွှာအညွှန်းနံပါတ်ပါမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏လူတွေမေးမြန်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ရက်ချိန်းယူExternal Linkပြီး သင်၏အွန်လိုင်းပုံစံကို ဖြည့်စွက်သည့်နေ့မှ 30 ရက်အတွင်း Australia Post အရောင်းဆိုင်တွင် ပါဝင်တက်ရောက်ပါ။ လူတွေ့မေးမြန်းရာနေရာသို့ သင်ပရင့်ထုတ်ထားသော အကျဉ်းချုပ်နှင့် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများExternal Link ကို ယူဆောင်လာပါ။ သင်၏ လူတွေ့မေးမြန်းမှုပြီးဆုံးသည့်အခါ Australia Post တွင် သင့်လျှောက်လွှာကို လက်မှတ်ထိုးရပါမည်။
သင်သည် Services Australia အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး TFN တစ်ခုအတွက် Australia Post ၌ လျှောက်ရန် မဆောင်ရွက်နိုင်ပါက Services AustraliaExternal Link စင်တာတွင် စာရွက်ပုံစံ Tax file number - application or enquiry for individuals (NAT 1432) (အခွန်ဖိုင်နံပါတ် - တစ်ဦးချင်းအတွက် လျှောက်လွှာ သို့မဟုတ် စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း) ကို ဖြည့်စွက်၍ လူကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
သင်သည် အွန်လိုင်းမှ တောင်းခံExternal Linkပြီး ပုံစံကို ဖြည့်စွက်နိုင်သည် သို့မဟုတ် Services Australia မှ သင့်ကို ပုံစံတစ်ခု ပေးနိုင်သည်။
သင်၏ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများမှာ မူရင်းများဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ စာရွက်စာတမ်း မိတ္တူများ - သြစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်း လျှောက်ထားသူများ သို့မဟုတ် သင်လိုအပ်မည့် စာရွက်စာတမ်းများအတွက် ပုံစံပေါ်က ညွှန်ကြားချက်များကို ကြည့်ရှုပါ။
သင်၏ TFN ကို ATO မှ ရရှိရန် သင့်တွင် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော Services Australia ရှိပါက TFN တစ်ခု လိုအပ်ချက်အတွက် သင်၏အကြောင်းပြချက်အဖြစ် Services Australia (Centrelink) ကို ပေးရန် ရွေးချယ်ပါ။
စီမံဆောင်ရွက်ပြီးသည်နှင့် သင်၏ TFN ကို Services Australia သို့ ကျွန်ုပ်တို့ ပေးပို့သွားမည်။
သင်သည် Australia Post လက်လီအရောင်းဆိုင်တွင် ပါဝင်၍ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်းကို မတက်ရောက်နိုင်ပါက သို့မဟုတ် သင်သည် Services Australia အသုံးပြုသူတစ်ဦးမဟုတ်ပါက သင်သည် စာရွက် ပုံစံကို ဖြည့်စွည်ရန်လိုသည်။
သင်သည် ဤပုံစံမိတ္တူကို အောက်ပါနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် ရရှိနိုင်သည် -
အွန်လိုင်းမှ တောင်းခံခြင်းExternal Link – Tax file number – application or enquiry for individuals (NAT 1432) (အခွန်ဖိုင်နံပါတ် – တစ်ဦးချင်းအတွက် လျှောက်လွှာ သို့မဟုတ် စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း)
ဖုန်း 1300 720 092 သို့ တစ်ရက် 24 နာရီ၊ တစ်ပတ် ခုနစ်ရက် ခေါ်ဆိုပါ သင့်အနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား မဟုတ်သော အခြားဘာသာစကားတစ်ခုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် စကားပြောလိုပါက ဘာသာပြန်နှင့် စကားပြန် ဝန်ဆောင်မှု ဖုန်း 13 14 50 သို့ ခေါ်ဆို၍ အကူအညီတောင်းခံနိုင်သည်
သင်ဖြည့်စွက်ထားသော TFN လျှောက်လွှာနှင့် သင်၏ အတည်ပြုထားသော မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူများကို ပုံစံပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် လိပ်စာသို့ ပေးပို့ပါ။
မှတ်ချက် - သင်၏ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း မူရင်း အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ မပေးပို့ပါနှင့် - ၎င်းတို့ကို သင့်ထံသို့ ပြန်ပို့ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
တစ်ဦးချင်းအတွက် TFN – လျှောက်လွှာ – ပုံစံဖြည့်စွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်များ
စာရွက်စာတမ်း မိတ္တူများ - သြစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်း လျှောက်ထားသူများ
သြစတြေးလျနိုင်ငံရင်းမြစ်မှ ဝင်ငွေရရှိသော သြစတြေးလျနိုင်ငံပြင်ပတွင် နေထိုင်သူများအနေဖြင့် သြစတြေးလျဘဏ်အကောင့်မှ သို့မဟုတ် သြစတြေးလျရှယ်ယာများ၏ အစုပေါ်အမြတ်များမှ ကြိုတင်ကောက်ခံထားသည့် အခွန်တစ်ခုခုမှ ပြန်အမ်းငွေတစ်ရပ် တောင်းဆိုရန် tax file number (TFN) တစ်ခု လျှောက်ထားနိုင်သည်။
သင်သည် အခွန်ကိစ္စများအတွက် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည့် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သြစတြေးလျ ရင်းမြစ်တစ်ခုမှ အတိုး၊ အစုပေါ်အမြတ်များ သို့မဟုတ် မူပိုင်ခပေးချေငွေများသာ ရရှိပါက သင့်အနေဖြင့် TFN တစ်ခု မလိုအပ်ပါ။
သင်၏ငွေပေးချေသူအနေဖြင့် ကြိုတင်ကောက်ခံထားသင့်သည့် အတိုးနှုန်းများကို သိရှိရန် အတိုး၊ အခွန်ပေးဆောင်ထားသော အစုပေါ်အမြတ်များနှင့် မူပိုင်ခများကို ကြည့်ရှုပါ။
သင်သည် ဤသို့ဖြစ်လျှင် TFN တစ်ခု လျှောက်ထားနိုင်သည် -
အတိုး၊ အစုပေါ်အမြတ်များ သို့မဟုတ် မူပိုင်ခပေးချေငွေများမှမဟုတ်သည့် သြစတြေးလျရင်းမြစ်တစ်ခုမှ ဝင်ငွေရရှိလျှင် ဥပမာ ငှားရမ်းခဝင်ငွေ
သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်ပြီး မိသားစုအခွန် အကျိုးခံစားခွင့်ကို လျှောက်ထားသော အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦးရှိလျှင် သို့မဟုတျ ကလေးစောငျ့ ရှောကျမှု့ ထောကျပံ့ငှေ
သြစတြေးလျ သက်ပြည့်အငြိမ်းစားလစာရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဤသို့ဖြစ်လျှင်
သင်သည် အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိရန် မျှော်မှန်းထားပါက
သင်သည် တစ်ကိုယ်ရေထောက်ပံ့ကြေးများထည့်ဝင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါက
သင့်ကိုယ်စား ထောက်ပံ့ကြေးများ ထည့်ဝင်ထားပါက
သြစတြေးလျ အခွန်စည်းကြပ်ရန်တင်ပြရမည့် ဝင်ငွေစာရင်းတစ်ခု တင်သွင်းရန် သို့မဟုတ် သြစတြေးလျနိုင်ငံ စီပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်နံပါတ် (ABN) တစ်ခု လျှောက်ထားရန် လိုအပ်လျှင်
Tax file number – application or enquiry for individuals living outside Australia (အခွန်ဖိုင်နံပါတ် – လျှောက်လွှာ သို့မဟုတ် သြစတြေးလျနိုင်ငံပြင်ပတွင် နေထိုင်သူများအတွက် စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း ) ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး ဖြည့်စွက်ပါ။
သင်၏ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားကို သက်သေပြရန် အတည်ပြုထားသော စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူများ တင်ပြရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ မူရင်းစာရွက်စာတမ်းများကို သင့်ထံသို့ ပြန်ပေးပို့နိုင်မည်မဟုတ်သဖြင့် သင်၏မူရင်းစာရွက်စာတမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ဆီ မပေးပို့ပါနှင့်။ ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားသော ပုံစံနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ပုံစံပေါ်မှ လိပ်စာသို့ စာတိုက်မှ ပေးပို့ပါ။
သြစတြေးလျနိုင်ငံပြင်ပ၌ရှိသော လူများနှင့် စီးပွားရေး အခြေချနေသူများအတွက် - မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား
စာရွက်စာတမ်း မိတ္တူများ - သြစတြေးလျနိုင်ငံပြင်ပ လျှောက်ထားသူများ
အခွန်ကိစ္စများအတွက် သင်၏နေထိုင်မှုအခြေအနေကို တွက်ချက်ကြည့်ခြင်း
A tax file number (TFN) is your free personal reference number for tax and superannuation. Find out how to apply foraTFN and keep your details safe - Burmese translation.
Last modified: 06 Oct 2021QC 66568